Chii chinonzi fenugreek uye chii chinoshandiswa? | Bezzia
Pau Heidemeyer | 20/04/2021 23:55 | Matipi ehutano, Utano
Kana iwe uchifarira kuziva kuti fenugreek chii uye kuti ingakubatsira sei kuvandudza hutano hwako, ramba uchiverenga kuti uone kuti zvakanakirei mbeu idzi, izvo zvinoshandiswa uye zvinoshandiswa sei.
Ukasarudza kuisa chikafu ichi muzuva rako zuva nezuva, unogona kunatsiridza kudya kwako, nekuti chikafu ichi chinokutendera kudzora kushushikana kwako pamusoro pechikafu. Inopa faibha uye inorebesa kunzwa kwekuguta uye inoderedza tsika yekudya pakati pezvokudya.
Fenugreek inozivikanwawo se fenugreek, icho chigadzirwa chagara chakamira kubvira nguva dzekare nekuda kwehutano hwayo uye hutano hwakanaka. Inotorwa seyokuwedzera uye yeayo zvivakwa, uye parizvino inoshandiswa kugadzirira mishonga yakasiyana.
Fenugreek mhodzi vane zvinovaka muviri zvakakosha izvo zvinowanisa zvakasiyana uye zvine hutano kudya. Pakati pezvakanakira zvinonyanya kutaurwa pairi ndeye ayo anopesana-nekuzvimba uye antioxidant mhedzisiro, inogona kuve rutsigiro kana zvasvika pakudzivirira akasiyana siyana zvirwere.
Kunyangwe kushandiswa kwayo kuchionekwa sekuchengetedzeka, mhedzisiro inogona kusimuka kana ikadyiwa nenzira yakanyanyisa, nekudaro, mukutambura kwechero chirwere, Izvo zvakakosha kuti ubvunze chiremba iwe waunofunga kutora fenugreek usati waitora pane inoenderera hwaro.
1 Fenugreek maitiro
1.1 Aya ndiwo maitiro ayo ane hutano
2 Fenugreek mukurapa
2.1 Inowedzera kugadzirwa kwemukaka wemukaka
2.2 Wedzera testosterone
2.3 Chengetedza glucose yeropa
2.4 Dzora chishuwo chako
2.5 Tonga cholesterol
2.6 Dzora chirungurira
3 Iwe unotora sei fenugreek?
4 Fenugreek infusion
5 Fenugreek contraindications uye mhedzisiro
Fenugreek chikafu chinobva mumuti unozivikanwa se Trigonella foenum-graecum, Ine maruva madiki uye machena, ayo ane mbeu dzinoshandiswa pakurapa kwepanyama uye gastronomy.
Nhoroondo, yakamboshandiswa kubika nayosezvo ivo vanokosheswa nekuda kwehutano hwavo hwehukama uye hushoma hwenuturu hwekunaka. Kunyangwe nanhasi izvo zvichiri kushandiswa kazhinji kazhinji muIndia neAsia mabikirwo.
Aya ndiwo maitiro ayo ane hutano
Fenugreek haifanire kudyiwa muakawanda, asi zvakadaro, fenugreek ine hutano hunhu hunofanirwa kuziva. Tinogona kuratidza kuti mbeu dzayo dzine huwandu hwakakura hwemaminerari akakosha kune hutano nemuviri simbi, magnesium, calcium, mhangura, zinc, selenium uye potasium. KANASupuni yembeu yakazara inopa dzinosvika makumi matatu nemashanu macalorie, ayo maumbirwo ndeaya:
Fibre: 3 magiramu
Mapuroteni: 3 magiramu
Carbohydrate: 6 magiramu
Mafuta: 1 gramu
Iron: 20% yezvinodiwa zvezuva nezuva.
Manganese: 7% yezvinodiwa zvezuva nezuva.
Magnesium: 5% yezvinodiwa zvezuva nezuva.
Iko kushandiswa kwe fenugreek kwakapararira kune nyika zhinji pamusoro pemakore, hezvino kushandiswa kwe fenugreek:
Inowedzera kugadzirwa kwemukaka wemukaka
Kudya fenugreek yemakwenzi tii inomutsa kugadzirwa kwemukaka wemukaka. PInogona kukurudzira kuwedzera uremu muvacheche.
Humwe humbowo hwekiriniki huchiri kudikanwa kumisikidza mabhenefiti uye zvinokuvadza zve fenugreek mukuyamwa vakadzi.
Inoshandiswa sekurapa kwe testosterone kushaiwa chirwere. Kudya kwayo kunogona kubatsira kuwedzera testosterone mazinga. Kana ikadyiwa nguva dzose, inogona kuwedzera basa repabonde nekuvandudza simba.
Chengetedza glucose yeropa
Icho chikafu chinopa chinonakidza mupiro wefibre, chinhu chakakosha chinovaka hutano, sezvo ichivandudza mashandiro e insulini pamasero, ndosaka chikonzero ichi inogona kudzivirira chirwere cheshuga.
Dzora chishuwo chako
Kudya kunoenderana nezvakakangwa chikafu uye chikafu chinokurumidza kunogona kuitisa kuwedzera zviratidzo zvekushushikana. Kana tikatora fenugreek nguva dzose, tichakwanisa kudzikamisa kushushikana nezve chikafu. Inopa fiber uye inoita kuti tinzwe kugutsikana kwenguva yakareba, nekudaro kudzora kuruma pakati pekudya.
Vanhu vanotambura necholesterol yakawanda vanogona kuve nekuvandudzwa muhutano hwavo pavanotora chikafu ichi, vanogona kudzora nekuvandudza mhando yekudya kwavo. Yayo antioxidant zvivakwa inofarira kuparara kweanokuvadza lipids, uye inogona kudzivirira kunetseka kubva kune yakavharika tsinga.
Kana isu tikatora infusion inogadzirwa nembeu idzi inogona kufarira kuzorodzwa kwehuchi, izvo zvikamu zvinoshanda nenzira imwechete, ivo vanodzora kugaya pH.
Iwe unotora sei fenugreek?
Kana isu takagutsa iwe kuti utange kutora fenugreek, iwe uchafanirwa kuziva kuti ingatorwa sei uye kwaunogona kuitenga. Kuti uidye uchafanirwa kusarudza fomati, nekuti mhodzi dzakapwanywa dzinogona kumedzwa zvakananga, ne anokwana madiki maaspuni maviri pazuva, akapatsanurwa kuita maviri akapatsanurwa.
Mbeu yakanyoroveswa inotorwa kakawanda pazuva, musanganiswa uyu unogadzirwa nehafu yepuniki pamarita maviri emvura. Kushandiswa kwaro kunokurudzirwa pane isina chinhu mudumbu, kunyangwe ichigonawo kutorwa zuva rese.
Kune rimwe divi, lFenugreek capsules, tinctures, uye zvinwiwa zvemvura zvinotorwa nemvura kana imwe mvura inoenderana, senge muto. Mbeu dzeFenugreek dzinogona kuwanikwa muzvitoro zvekudya zvine hutano kana zvitoro zvepamusoro, senge izvo zvinotengesa zvigadzirwa zvechikafu zvakawanda.
Kana zviri zvehuwandu hwemari, iwe unofanirwa kuziva:
Makapuleti maviri e5 magiramu pazuva.
2 ml kana iwe ukasarudza kuitora mu tincture, inotorwa nepakati inotora.
Kana iwe ukafunga kutora iyo muupfu kana mhodzi, tora maaspuni maviri pazuva rakakamurwa kuita miviri.
Kana iwe ukafunga kuita infusion, izvo zvaunoda kuti unyatsoigadzira kuisa teaspoon yembeu fenugreek mukapu yemvura irikufashaira. Unofanira kurega ichizorora kwemaminitsi manomwe, wozvinetsa woitora sezvaunoda zvakanyanya, zvinotapira kana pasina kuwedzera chero chinhu. Mbeu dzinofanirwa kukandwa kure sezvo vatove kuita basa ravo rakazara, vachisiya zvivakwa zvavo mumvura.
Fenugreek contraindications uye mhedzisiro
Kufanana nezvikafu zvese zvinobatsira kumuviri, isu tinofanirwa kufunga kuti vanogona kuve nemhedzisiro uye zvinopesana zvichienderana nenyaya yacho. Mhedzisiro inowanzoitika ndeinotevera:
Huwandu hukuru hwekubata kumeso.
Allergy, kunyanya mune vanhu vane allergies kune nzungu.
Fenugreek chikafu chine hutano kwazvo kana iwe uchiziva kuitora nenzira kwayo, mhedzisiro yacho inofanirwa kudzorwa kuitira kuti pasave nekupokana kana chero matambudziko asingatarisirwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Chii chinonzi fenugreek uye chii chinoshandiswa?
Zvinhu zvinoshandura kuenda kwako kumwedzi